Ezona ndawo ziNinzi ezinokuThengiswa kweNdlu yaselwandle- Apho ungathenga khona iNdlu yaselwandle - Indlela Yokuphila
Ezona ndawo ziNinzi ezinokuThengiswa kweNdlu yaselwandle- Apho ungathenga khona iNdlu yaselwandle
Ukuba ubusoloko ufuna ikhaya lasehlotyeni elunxwemeni apho unokukhululeka khona echibini kwaye mhlawumbi udlale iBaywatch IRL, awuwedwa: Kuba ixabiso lamakhaya kwizixeko ezikhulu alinangqondo kwaphela, abantu abaninzi bathenga amakhaya eeholide . Kwaye hayi, asikucebisi ukuba uqokelele imali enkulu yendlu kwiiHamptons, nokuba (ngaphandle kokuba unezigidi ezipholileyo ezilele ngeenxa zonke, apho ngazo zonke iindlela). Sibuze abahlobo bethu e Zillow Ukusixelela ezona dolophu zifikelelekayo kunxweme apho unokufumana amanqaku kwikhaya leholide, usebenzisa i-Zillow Home Value Index, kwaye iziphumo zazinethemba elimangalisayo. Apha ngezantsi, ikhaya lakho lamaphupha lilindile.
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi10 EMelbourne, eFlorida UStephen Wood / EyeEmImifanekiso kaGetty
Ixabiso eliphakathi leKhaya: $ 243,649
Ngasemazantsi eOrlando yiMelbourne, iparadesi yokuntywila kunye neekhilomitha zeelwandle ezingafakwanga, umoya opholileyo ongaguquguqukiyo, amaziko eyoga aliqela kunye neeaspisi, kunye nobusuku obonwabisayo. Inento kuyo yonke iminyaka, kwaye ngekhe ube ngaphandle kwemithi yesundu ukugcina inkampani.
9 I-Fort Walton Beach, eFlorida UDwayne Mcfarlane / EyeEmImifanekiso kaGetty
Ixabiso eliphakathi eKhaya: $ 220,915
Thenga ikhondomu ejonge amanzi amhlophe amangalisayo eFort Walton Beach, kwaye uyakucinga ukuba kutheni uhlala phi na. IParkarium Marine Adventure Park likhaya leengwenya, iminenga, kunye namahlengesi, ngelixa iProps Craft Brewery ikuvumela ukuba uphonononge inkcubeko yobugcisa bommandla ngokulula. Ukungathethi, ukuhamba ngephenyane kunye neminyhadala yokutya zizinto eziqhelekileyo kule ndawo.
I-hgtv iphupha abaphumeleleyo ekhaya
8 IFort Pierce, eFlorida UDwight Williams / EyeEmImifanekiso kaGetty
Ixabiso eliphakathi eKhaya: $ 164,306
Ihlala ibizwa ngokuba sisixeko saseSunrise, iFort Pierce imi kwiTreasure Coast (ebizwa ngokuba kukutshona kwenqanawa yaseSpain ngeminyaka yoo-1700). Cinga umtsalane omdala waseFlorida nge-twist: Iindwendwe zinokonwabela ukuthenga nokutya okwangoku, kunye noluhlu lwemisebenzi emikhulu enje ngeNtengiso yamaFama, uBusuku beBhayisekile, uLwesihlanu lweFest, kunye neMarike yeJazz.
7 Imithombo yolwandle, iMississippi DaveMcDPhotoImifanekiso kaGetty
Ixabiso eliphakathi eKhaya: $ 163,948
Indawo yokuhlala esecaleni kweGulf Coast, e-Ocean Springs yiparadesi yosapho enobuhlobo. I-Front Beach Drive ibonelela ngendawo entle entle yamanzi, kwaye i-Ocean Springs Beach ivumela imisebenzi emininzi yamanzi, nokuba yonke into oyifunayo yipikniki enobuvila esantini.
6 IPensacola, eFlorida UDan Reynolds PhotographyImifanekiso kaGetty
Ixabiso eliphakathi eKhaya: $ 159,556
Ezi zinxweme ezintle ezimhlophe ziyakwenza ukuba ufune ukuhlala unyaka wonke, ngakumbi kuba iPensacola inamaxesha amdaka kuwo wonke unyaka. Nokuba ufuna ukuntywila, thatha inxaxheba kukhenketho lwehlengethwa, i-snorkel, okanye ukuya kwi-surfing, konke kuyafumaneka kuwe-kunye neendawo zokutyela nemivalo ezinesitayile.
5 IBiloxi, iMississippi URichard T. NowitzImifanekiso kaGetty
Ixabiso eliphakathi eKhaya: $ 148,678
Isiginesha yabo ephawulweyo yindawo yakudala yeBiloxi Lighthouse (yasinda nakwiNkanyamba uKatrina!), Kodwa zininzi ezinye izinto ekufuneka zenziwe eBiloxi. Ukusuka kuhambo oluya kwiMyuziyam yaseMardi Gras ukuya ekuboneni ihlengethwa eShip Island, awusoze uphelelwe ngumtsalane ukuze uwuphonononge.
4 I-Bay St. Louis, eMississippi UJohn ColettiImifanekiso kaGetty
Ixabiso eliphakathi eKhaya: $ 137,897
Umbala we-2020 wonyaka
Elinye igugu laseMississippee, iBay St. Inomtsalane omnandi, opholileyo, ofanelekileyo ukuba ujonge ukuphumla kwehlobo.
3 IGulfport, iMississippi URichard T. NowitzImifanekiso kaGetty
Ixabiso eliphakathi eKhaya: $ 128,836
Ingabonakala ngathi sisiphakamiso esingaqhelekanga, kodwa sive: I-Coastal Mississippi iphantsi kakhulu! Ukusuka kwizikhephe eziqeshiweyo ukuya kwiikhasino nakwiindawo zamanzi, yindawo entle yasehlotyeni… kwaye ifikeleleke kakhulu, ukuqala.
Eyona mibala ifanelekileyo yokupeyinta emhlophe
Mbini IFreeport, eTexas mzantsiwebImifanekiso kaGetty
Ixabiso eliphakathi eKhaya: $ 107,235
Imizuzu kude neGulf of Mexico, iFreeport liphupha lomthandi wamanzi. Ukuhamba ngenqanawa emanzini e-crystal kwaye ujonge iJetty Park. Kufuphi neSurfside Beach ikwayindlela emnandi ngokwenene yokuchitha usuku.
1 IPort Arthur, eTexas DenisTangneyJrImifanekiso kaGetty
IFreeport, iTexas iidola ezingama-63,917
Ikhaya lasesiQithini sePleasurement esenziwe ngabantu, iPort Arthur ikunika idosi enelanga yamanzi unyaka wonke. Fumana indalo kwakhona eLwandle Rim State Park, kwaye ujonge iMyuziyam yeGulf Coast ukubona ukuba iPort Arthur ibenegalelo lini kwinkcubeko ye pop. Inqaku: UJanis Joplin wayevela apha!
zifa nini iimpukane
ibhafu kunye nomzimba usebenza ezivenkileni
ikhitshi elineekhabhathi eziluhlaza
Ipati yomxholo wokuzalwa kwabo
Igumbi lokuhlala lekrisimesi